igumbi elincane elingu-800 aluminium ophahleni lombala wombala womshini owenza umshini womshini INDONESIA
South African Zulu igumbi elincane elingu-800 aluminium ophahleni lombala wombala womshini owenza umshini womshini INDONESIA
I-aluminium nophahla lwama-aluminium 800 ibukeka kahle futhi umbala ogqamile. Isetshenziswa kabanzi ensimini, efektri, ehhotela, ehotela, ehholo lokubukisa, eholidini, ezinqabeni zasendulo nasezindaweni zanamuhla.
I-aluminium engama-aluminium nophethiloli we-tile roll eyenziwe ngokuyinhloko ithengiswa kakhulu e-Indonesia Bathanda imikhiqizo yezinto eziphahleni zetayilumini ephahleni.
I-aluminium ejwayelekile yama-aluminium e-800 ngaphambi kokugubha i-coil ingu-914mm, izinto ezisetshenziselwa ukugcizelela izinto zensimbi ze-PPGI zangaphambili. Futhi ngemuva komqulu owenza ububanzi obuvamile buyi 800mm.
I-aluminium ephelele ye-aluminium engxenyeni yomshini wokwakha umshini ihlanganisa i-decoiler, umshini wokwakha umshini, uhlelo lokulawula ikhompyutheni, i-puncher inthanethi ne-table out.